यस्तो छ सबैलाई भावुक बनाउने युवतीको सुसाइड नोट – जलजला अनलाइन
Posted on February 11, 2019 Author Comments Off on यस्तो छ सबैलाई भावुक बनाउने युवतीको सुसाइड नोट
माघ २८, वीरगन्ज । भारतीय सहर रक्सौलको दक्षिणी गाउँमा आइतबार रेलले किचेर ज्यान गुमाएका दुई नेपाली किशोरीको कोठाबाट ‘सुसाइड नोट’ फेला पारेको छ ।
यो खबर क्रान्ति शाहले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । दुवै किशोरी बस्दै आएको वीरगन्ज महानगरपालिका रानीघाटस्थित कुमारीमाई मन्दिर नजिकैको डेराबाट सुसाइड नोट फेला परेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले जानकारी दिए ।
प्रहरी उपरीक्षक ढकालका अनुसार रातो मसीले लेखिएको सुसाइड नोटको सुरुमै ‘आदरणीय आमाबुवा हामीलाई क्षमा गर्नुहोला…’ भन्ने लेखिएको छ । त्यपछि सुसाइड नोटमा…. ‘हामीले तपाईँहरुको सपना पूरा गर्न सकेनौँ, त्यसैले अब बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो, हामीले निर्णय गर्दैछौँ, यो हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय हो, यसमा कसैको केही गल्ती छैन, आइ लभ यु पापा आइ लभ यु ममी अलबिदा…..लेखिएको छ ।
दाङका प्रहरी चौकीहरु भारतीय फोनबाट सञ्चार प्रवाह गर्दै, यस्तो छ अचम्मको भित्री कारण
Posted on February 28, 2018 Author जलजला अनलाइन
फागुन १६, दाङ । भारतीय फोनबाट दाङमा प्रहरीले सञ्चार प्रवाह गरिरहेको छ। जिल्लामा भारतीय सीमा जोडिएका प्रहरी युनिट अहिले पनि भारतीय फोनको भरमा सञ्चार प्रवाह गरिरहेका छन्। नेपाल–भारत नाका क्षेत्रका अधिकांश प्रहरी चौकीले भारतीय सिम प्रयोग गर्दै आएका छन्। नाका क्षेत्रमा नेपालका कुनै पनि सञ्चार सञ्जालले काम नगरेपछि त्यहाँका प्रहरी चौकीले भारतीय फोन नम्बर प्रयोग […]
पाइलटले नाइँ भन्न नसक्दा…
फाल्गुन १८, काठमाडौँ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको ज्यान गएको हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण के होला ? यसबारे सबैको चासो छ । तर यसको कारण पत्ता लगाउन भने चुनौती देखिन्छ । विश्वभर वायुयान दुर्घटनाको तथ्यांक अध्ययन गर्दा साना विमान तथा हेलिकप्टर दुर्घटना दर उच्च छ । सुरज कुँवरले कान्तिपुरमा लेखेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार यसको […]
सरकारको यस्तो घोषणाले सिन्डिकेट लाद्ने व्यवसायीलाई लाग्यो ठुलो झट्का
चैत २१, काठमाडौं । कोटेश्वर पूर्वका ११ वटा समितिले अरनिको राजर्मागमा बस रोकेपछि सरकारले अन्य व्यवसायी तथा कम्पनीलाई काठमाडाैंबाट धुलिखेलसम्मको रुट इजाजत लिन आउन आह्वान गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले धुलिखेलसम्म चलाउन इच्छुकलाई बुधबार (अाज) नै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर रुट दिने गरी यस्तो आह्वान गरेको हो । अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवमा समितिहरुले हड्ताल गरेपछि […]